ထိုင်းနိုင်ငံမှာပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနေတဲ့ကိုရီးယားမလေး DJ Soda
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရေကစားနေတဲ့ကိုရီးယားမလေး DJ Soda
20 Apr 2018 . 6:00 PM
ထိုင်းနိုင်ငံ ကို ရောက်နေတဲ့ DJ Soda တစ်ယောက် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သင်္ကြန်လို့ ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိတဲ့ Songkran Day မှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ရေကစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုရေကစားနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း သူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ DJ Soda
အဲ့ဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ရှု့သူတွေ ဦးရေဟာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခင်မှာ ၆ သိန်းကျော်အထိ ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ DJ Soda ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရေဆော့နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် လည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ DJ Soda ကတော့ ကိုရီးယား DJ အကျော်အမော်လေးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း လာရောက်ဖျော်ဖြေဖူးတဲ့ မိန်းကလေးDJ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
태국 송크란 축제🚿💦 Happy #Songkran Days ! 💙 #songkranfestival #thainewyear 💧
A post shared by Dj Soda Official 🇰🇷 (@deejaysoda) on Apr 19, 2018 at 9:05am PDT
Photo Credit: DJ Soda Instagram
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ရကေစားနတေဲ့ကိုရီးယားမလေး DJ Soda
ထိုငျးနိုငျငံ ကို ရောကျနတေဲ့ DJ Soda တဈယောကျ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ သင်ျကွနျလို့ ချေါဝျေါလရှေိ့တဲ့ Songkran Day မှာ ပြျောရှငျစှာနဲ့ ရကေစားနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ အခုလိုရကေစားနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး သူမရဲ့ Instagram အကောငျ့မှာတငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရောကျနတေဲ့ DJ Soda
အဲ့ဒီ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ကွညျ့ရှု့သူတှေ ဦးရဟော ၂၄ နာရီ မပွညျ့ခငျမှာ ၆ သိနျးကြျောအထိ ရှိခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ DJ Soda ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ရဆေော့နတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မကွညျ့ရသေးသူတှအေတှကျ လညျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ DJ Soda ကတော့ ကိုရီးယား DJ အကြျောအမျောလေးတဈဦး ဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံကိုလညျး လာရောကျဖြျောဖွဖေူးတဲ့ မိနျးကလေးDJ တဈဦးဖွဈပါတယျ။